Tsy nisy fampilazana mialoha anefa fa omaly alarobia 02 oktobra 2019 tamin'ny 3ora tolakandro no tonga taty an-toerana ny iraky ny ministera, niaraka tamin'ny mpandrefy tany, no nilaza fa alaina izao dia izao ny tany, anamboarana lalana miditra amin'ny toerana anorenana ny building, fa ho avy ny zoma zao ny Filoha hametraka ny vato fehizoro amin'izany.
Samy taitra moa ny rehetra, ka nilaza ireto iraka fa rahampitso maraina, miantso ny androany alakamisy no ho avy eo ny Minisitry ny asa vaventy hifampiraharaha aminareo.
Tonga tokoa ny androany alakamisy, dia nanambara ingahy Minisitra Hajo Andrianainarivelo fa ilain'ny fanjakana ny tany, ary efa tonga ireo koa ny mpanao lalana, fa misy building 9 no atsangana miaraka amin'ny orinasa SEIMAD, ary aharitra iray taona ny asa. Ka raha misy tanora efa manambady latsaky ny 35 taona ao an-tokatrano, dia afaka misitraka lohalaharana amin'izany building amboarina izany.
Rehefa vita ny zoma maraina ahatongavan'ny filoha, dia ny tolakandro no mifampiraharaha momba ny fanonerana ny tany nalaina.
Tian-kano tsy tiankano moa ity raharaha ity, ka dia niditra avy hatrany ireo mpanapaka manga, sy mpitrongy tany, nesorina avokoa ny trano sy ny hangar tandrify ny faritra nalaina, ary dia samy mianton-tena amin'izany.
Raha ny re, dia ihitatra any amin'ny petite plage ity fanorenana vaovao ity, ka ho voakasik'izany ihany koa ny ao ambadiky ny vitrine de Madagascar teo aloha, mitohy any Madirokely.
Nanambara ireto fianakaviana voakasik'izao raharaha izao, fa ilaina tokoa ny fandrosoana sy fanorenana, fa tsy maintsy alaina an-keriny tampoka tsy misy alaharo ohatr'izao ve? Tsy mba afaka mifampidinika sy mifampilaza mialoha ve, nefa hanao building izany, tsy tokony efa tetikasa voadinika efa ela, na ny fijerena ny nofotany anorenana fotsiny aza ve, dia tsy efa afaka nampilaza mialoha, fa 24ora dia miala fa ilain'ny fanjakana ny tany.
"Sao mba fanjakana mpandrava izany fa tsy fanjakana miaro ny vahoaka sy ny fananany" hoy ireto fianakaviana nalahelo.